ज्ञवालीपछि को बन्छ नयाँ आइजिपी? क्षेत्री कि पाल? खबरमञ्च
१६ असार, खबरमञ्च, at 7:30 AM
By खबर मञ्च / June 30, 2020 / Comments Off on ज्ञवालीपछि को बन्छ नयाँ आइजिपी? क्षेत्री कि पाल?
Last Modified: June 30, 2020 @ 9:06 am
अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट निजी क्षेत्र हटाएर विधेयक पारित गरिँदै